कोरोना ग्राफ उच्च- आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएको स्वास्थ्यकर्मीको चेतावनी - Baikalpikkhabar
कोरोना ग्राफ उच्च- आइसियु र भेन्टिलेटर भरिएको स्वास्थ्यकर्मीको चेतावनी
काठमाडौँ/ कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमित हुनेहरुमा युवाको संख्या धेरै देखिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहीबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो उमेर समूहका १ हजार १ सय ३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
बिहीबार सबैभन्दा धेरै संक्रमिण पुष्टि भएको उमेर समूह विभिन्न ठाउँमा धेरै सक्रिय हुने भएका कारण उनीहरुमा संक्रमण धेरै देखिएको बताउँछन्, डा. अनुप बास्तोला।
‘२० देखि ३९ वर्ष उमेर समूह भनेको सबैभन्दा धेरै सक्रिय हुने समूह हो। यहीमध्ये एउटा उमेर होहल्ला गर्ने, भिडभाडमा जान रमाउने हुन्छ। जसले गर्दा उनीहरु संक्रमित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र संक्रमित भएका पनि छन्’, उनले भने, ‘अर्को भनेको विदेश जाने धेरै व्यक्तिहरुले परीक्षण गराएका छन्। उनीहरुको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ।’
बिहीबार मात्रै देशभर २ हजार ३ सय ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ५ सय ७५ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ३० देखि ३९ वर्षसम्म उमेरका ५ सय ५५ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अझै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्ने हो भने स्थिति अझै नाजुक हुने डा. बास्तोला बताउँछन्। उनका अनुसार खतराको घण्टी बजिसकेको छ। युवा अवस्थाका व्यक्तिहरुले अस्पताल भरिसकेका छन्। उनीहरुलाई भर्ना मात्रै नभएर आइसियू र भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छ।
उनका अनुसार संक्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। परीक्षण नभएका कारण जति संक्रमितको संख्या बढ्नु पर्ने हो त्यति देखिएको छैन। खर्च हुने डरले लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुले समेत परीक्षण नगरी अस्पताल पुग्ने गरेको डा. बास्तोलाले बताए।
यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने स्थिति एक वर्ष अगाडिको भन्दा पनि भयावह हुने उनले बताए। ‘सरकारले भने बमोजिम सबै जनस्वास्थ्यका मपदण्डको पालना गरौँ। अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्कँदै ननिस्किउँ। बाहिर निस्कनै परे पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। दूरी कायम गरौँ’, उनले भने, ‘सरकारले भनेका कुरालाई पहिलेजसरी बेवास्ता गर्ने हो भने यो पटक संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुने छ।’
केही हप्ता यता संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसले गर्दा अस्पतालहरुमा चहलपहल बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार हुँदै आएका अस्पतालहरु भरिएका छन्। अस्पतालहरुमा बेड नपाउने अवस्थामा विरामीहरु पुगिसकेको डा. अनुप बताउँछन्।
‘अस्पतालमा बेडको अभाव हुन थालिसकेको छ। आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिसकेका छन्। पहिलाको जस्तो छैन। स्थिति जटिल हुदै गएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गर्नुस् र सुरक्षित बस्नुस्। बिरामी अस्पताल पुग्ने बित्तिकै निको हुन्छ भन्ने हुँदैन। अर्को कुरा भनेको बेला बेड नपाउने सक्ने सम्भावना धेरै छ, अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने।’
उनले भने,‘अस्पताल पुगेका कति संक्रमित हुन्छन्। तर उनीहरुसँग पीसीआर रिपोर्ट हुँदैन। स्वास्थ्य भन्दा ठूलो केही छैन। परीक्षण गराउनुस्। थोरै पैसाको लोभ गर्दागर्दै ज्यानै गुमाउनु नपरोस्।’
दैनिक रुपमा उकाले चढ्दै गएको संक्रमणबाट बच्नका लागि पूर्णरुपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार, १० बैशाख, २०७८, बिहानको ०८:५६ बजे
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम...